Far Cry4– नेपाली परिवेशमा आधारित भिडियो गेम | जुज्दाइका २ पैसे विचारहरुको सँगालो
Far Cry4– नेपाली परिवेशमा आधारित भिडियो गेम
Posted on February 15, 2016 by jujumaan
आमाको इच्छा पूरा गर्न सन्तानले के गर्दैन?
खास यही मूल theme बोकेर Far Cry4भिडियो गेम बनाइएको छ। तर ‘आमाको इच्छा पूरा गर्ने’ बारे गेमले कहिल्यै इमो हान्दैन, र गेम खेल्नेलाई मिनेटैपिच्छे रुवाउँदैन। रूञ्चे सिर्जनामा डुब्ने र अरुलाई पनि जबरजस्ती डुबाउन खोज्ने हाम्रा २ पैसे झ्यास लेखकहरुले बुझे हुने।
नेपाली भाषा, भू-बनोट र तात्कालिन माओवादी द्वन्दमा आधारित भएर यो गेम बनेको छ भन्ने सुनेदेखिन खेल्न मन लाग्या थियो। गेम २०१४ को नोभेम्बरमा रिलिज भएपनि पढाइ, जागिर, ह्यान, र त्यानले गर्दा खेल्ने मेसो मिलेको थिएन। २०१६ को जेनुअरीमा बल्ल फुर्सद मिल्यो र खेल्न थालेँ। Far Cry4अघि Far Cry3खेलेको थिएँ, जसले निकै राम्रो प्रभाव (मनोरञ्जनका हिसाबमा) पारेको थियो। झन Far Cry4नेपाली परिवेशमा आधारित छ भन्ने थाहा पाएपछि त नखेल्ने कुरै भएन।
थप नेफोलीहरुलाई पनि यो गेम खेल्दा भोगेका रमाइला कुरा र मेरा आफ्ना अनुभव बाँडौ कि भनेर चुस्स २ लाइन लेख्दैछु आज।
** नोट: यो लेखमा spoilers छन। **
कथाको सार यस्तो छ:
अजय घलेको जन्म किराँत (Kyrat) राज्यमा हुन्छ। बाबु मोहन घले र आमा ईश्वरी घलेको छोरो अजय बालखै हुँदा आमा अमेरिका जान्छिन, र छोरालाई पनि साथै लान्छिन। किराँत छोडेर अमेरिका जानुको पछाडि किराँतमा व्याप्त गृहयुद्ध हो भनेर बुझाइन्छ (गेम खेल्नेलाई)। कुनै कारणवश ईश्वरीको मृत्यु भएपछि उनको शरीरदाहबाट निस्केको खरानी ‘किराँत राज्यको लक्ष्मणा (Lakshmana) मन्दिरमा सेलाइदिनु’ भन्ने उनकै इच्छा पूरा गर्न अजय आफ्नो जन्मभूमि फर्कन्छ। फर्केपछि गृहयुद्धको भूमरीमा अजय यसरी पर्दछ कि त्यसबाट उम्कन संघर्ष नगरी सुख छैन। र शुरु हुन्छ उसको आफ्नै खाले द्वन्द। किराँतमा चलेको गृहयुद्ध त्यहाँका राजा पगन मिन (Pagan Min) र रैथाने गुरिल्ला समूह द गोल्डेन पाथ (The Golden Path) बीच हो र अजयले गोल्डेन पाथपट्टि लाग्दछ। यसको मुख्य कारण चाहिँ गोल्डेन पाथका संस्थापक मोहन हुन्छन, र बाउले गरेको काम नराम्रो नहोला भन्ने मानसिकता पनि होला (prodigal son जस्तो)। राजाका सेनाका अनेकौँ सेन्ट्री पोस्ट र रेडियो टावरलाई ध्वस्त पार्ने क्रममा उसको भिडन्त राजाका विश्वासपात्रहरूसँग पनि हुन्छ। र अन्तमा राजा स्वयंलाई मारेपछि अजयले निर्वाध रूपमा आफ्नी आमाको अस्तु लक्ष्मणामा विसर्जन गर्न पाउँदछ।
अब plot twists बारे नि कुरा गरौँ। मुख्य twist चैँ अजयको बाउ पगन मिन हुन्छ। कुरो के रहेछ भने, मोहनले राजाको आनीबानी र उसको हतियार-पैसा-कारवाही-आदिबारे बुझ्नका लागि आफ्नै पत्नी ईश्वरीलाई पगनको दरबारमा पठाउँछ। ईश्वरीले पगन सोल्टीसँग मायाको (झुठो) नाता रच्छिन तर यै क्रममा पगनले ईश्वरीबाट एउटी छोरी उत्पादन गराउँछ। यी नानी अजयकी सौतेनी बहिनी भइन् भनौँ न। पछि जब पगन हल्का साइको हुन थाल्छ (गृहयुद्ध चर्काउने क्रममा), ईश्वरी छोरो च्यापेर अमेरिका भाग्छिन। अब छोरी किन लगिनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। गेममा केही पात्रहरुले गरेको खासखुसअनुसार मोहन घलेले छोरी मारिदिन्छ – किनकि छोरी उसकी हैन। र केही पात्रहरुले यो पनि भन्छन कि अजयलाई जोगाउन ईश्वरी अमेरिका भागेकी हुन। (त्यति सजिलै कसरी भाग्न सकिछन भन्ने लागेको त हो मलाई तर उत्तर भेटिनँ। मेरो एउटा अनुमान – ईश्वरीको मायाका कराण पगनले राजनीतिक बलका आधारमा भगाएको हुन सक्छ।) तर गेमको अन्तिममा पगनले रहस्य खोल्छ: मोहनले पगनकी छोरी मारेपछि ईश्वरीले मोहनको हत्या गर्छिन र छोरो लिएर अमेरिका जान्छिन। र यता श्रीमती र छोरी दुवै गुमाएको झोँकमा पगन थप साइको बन्न पुग्छ।
एनिवे, यहाँ अर्को twist: ती छोरीको नाम हो – Lakshmana. जब आमा उता मर्छिन, तिनको अन्तिम इच्छा छोरीसँगै रहन पाऊँ भन्ने रहेछ।
अब गेमबारे चर्चा गरौँ।
गेमको ग्राफिक्स् बबाल छ। मैले टन्नै फोटा अपलोड्या छु, हेर्दा हुन्च। फोटोसप नगरीकन टिभीको सेटिङ्बाट तान्या हुनाले केही फोटा अलि अँध्यारा देखिन सक्छन। बबाल शब्दले मात्र पनि अपुग हुन्छ होला। त्यस्तो हरीप छ ल्यान्डस्केप, गाउँहरु, बाटाहरु, खोला-नाला-झरनाहरु। टाढाका हिमाल लब्ली देखिन्छन। झन राति जून उदाउँदा चन्द्रमा, तारा, र हिमालहरु बहुतै मनमोहक देखिन्छन।
भलै गेम किन नहोस्, ग्राफिक्स् र ल्यान्ड्स्केपकै कारण पनि गेम खेलेजस्तो नभएर कुनै चलचित्र हेर्दैछु कि भन्ने लाग्ने धेरै ठाउँमा। गेममा राखिएका हात्ती, गैँडा, बाघ, चितुवा, बाँदर आदि पनि जीवन्त देखिन्छन।
बाघ र भालु कुस्ती खेल्दै छन
हाम्रो वास्तविक दुनियाँमा यी सबै जनावरहरु गेमको जत्रो सानो इलाकामा पाइनु सम्भव छैन। तर जसरी यिनीहरुलाई गेममा उतारिएको छ, त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ। झ्याक्ने चितुवाहरुले चैँ इरि हान्छन बेला न कुबेला पछाडिबाट आएर आक्रमण गरेर। यिनको हिँडाइ र आक्रमण लास्टै चाँडो हुने भएर होला, यिनलाई देख्नासाथ टुइँके कसेर भाग्थेँ म।
गाउँहरु र गाउँका घरहरु लगभग दुरुस्तै नेपालका मध्य-पहाडी गाउँहरुजस्ता छन, विशेषगरी गोरखा र कास्कीका गुरुङ गाउँहरुजस्ता। यसको कारण चाहिँ यो गेम बनाउनेहरु (developers) नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको बनोट हेरेर सिकेर गएका थिए। उनीहरुले भूपू माओवादी लडाकूहरुसँग पनि कुराकानी गरेका थिए – लडाकूहरुको हिँडाइ, बोलाइ, बन्दूक तेर्साइ, मान्छे तर्साइ, आदिलाई गेममा जीवन्त रूप दिन। र अरु नेपाली सिम्बोलिजमहरु: खेत, बाली, बाटा, रूखहरु प्राय नेपालकै (केही भूटानका अरे) नमूनामा डिजाइन गरिएका हुन।
थप बुझ्न यो भिडियो हेर्नुस्: http://www.polygon.com/2014/7/24/5935329/far-cry-4-goat-sacrifice-documentary-video
सिम्बोलिजमकै कुरा गर्दा एउटा उड्ने यन्त्र (buzzer) मा बुद्धका आँखाहरु पनि देख्न सकिन्छ ।
साथै, prayer wheels पनि छन धेरै मन्दिर, चैत्यहरुमा। गुम्बा तथा मानेहरु पनि धेरै ठाउँमा भेटिन्छन।
‘साँग्रिला’ मिसनमा भेटिने दृश्य
हल्का पोल्टिसको कुरा गरौँ। यो गेम खेल्नु अघि नै थाहा हुन्छ कि नेपालमा चलेको माओवादी द्वन्द र राजाको अवसान हुँदाको समय वरपर यो गेमको कथा बनेको छ। गुरिल्लाहरु, शाही सेना, र खुद राजाबीच जसरी नेपालमा उबेलाको माहोल थियो, त्यसरी नै गेम अघि बढ्दछ। शाही सेना र राजाको समाप्तिसँगै अजयले आफ्नो मनोकामना पूरा गर्दछ र देश र जनता सबैले शान्ति पाउँदछन। गेमका डेभलपरले सिधै यसको स्वीकारोक्ति नदिएको भए पनि नेपालको द्वन्द समेटेबारे भने सहमति जनाएका छन (माथिको भिडियो)। पगन मिनको सत्ताच्यूत, गुरिल्ला समूहभित्रकै गुट-उपगुट, सयौँ ठाउँमा सेन्ट्री राखेर जनतालाई दु:ख दिनु, गाउँमा छिरेर बाली नाश गरिदिनु, आदिले पनि यो गेम हाम्रा दु:खका दिनमै आधारित छ भनेर पुष्टि गर्छन।
अब भाषाको कुरा।
गेममा लडाकुहरुले बोल्ने भाषा अंग्रेजी र हिन्दी हो। दक्षिणतिरका लडाकुहरुले हिन्दी र अंग्रेजी बोल्छन भने उत्तरतिरकाले अग्रेजी मात्र। दक्षिणतिरका लडाकुहरुको accent भारतीय छ, र उत्तरतिरकाको चाइनिज। यो के कारणले बनाए, त्यो चैँ बुझिनँ।
नेपाली पनि बोल्छन तर धेरै थोरै। केही गाउँमा र मन्दिरहरुमा मात्र सुन्न पाइन्छ नेपाली बोलेको। बाटामा हिँड्नेहरुले हिन्दी वा अंग्रेजी मात्र बोल्छन। त्यसमाथि नि लगभग सबै नेपाली डायलगहरु अक्वार्ड लाग्ने किसिमले बोलिएका छन। कलाकारले नबोलेर आम मानिसलाई बोल्न लाइएजस्तो।
केटी: मलाई मेरो ब्वाइफ्रेण्डले चिट गर्दै छ नि।
केटा: ओहो, यो त गाह्रो कुरा भयो। के भन्ने नै थाहा भएन।
केटा १: नमस्ते तिमीलाई के समस्या छ साथी?
केटा २: मेरो छोरो भागेर राजकीय सेनामा भर्ती भयो।
केटा: (सेनाले) सुँगुर लगे।
केटी: यिनीहरुको प्रयास बाबजुद पनि जीवन नराम्रो छैन।
केटा: ज्यादै ठीक, मैले पनि मेरो मुहारमा मुस्कान ल्याएँ।
केटी: मेरोलागि तिमीसँग केही छैन?
केटा: जगतेकी बूढी फेरि गर्भवती भइछन नि।
केटी: हा, त्यो त पुरानो कुरो हो।
केटाको आवाजमा एकतर्फी थप डायलगहरु:
– यो वर्ष धान राम्रो फल्लाजस्तो छ।
– फलफूलमा केही किरा छैन। म आफैँले हेरेको।
– (एकजना मन्दिरमा) अन्यौलबाट मुक्ति दिनुहोस्।
– म संसारको निम्ति सदा सचेत रहनेछु।
– चुरोट चाहिन्छ तिमीलाई?
– तीर्थभूमि, मेरो कण्डो।
– मेरो बाजेले यो पर्खाल बनाउनुभएको हो। विश्वासै लाग्दैन यो अझै ठाडो छ।
सबै लेखेर त यहाँ सकिन्न। ओम पणे पद्मे हुम् भनेको नि सुनिन्छ गुम्बातिर तर यो भाषा नेपाली हैन।
केही ठाउँका नाम पनि नेपालीमा छन। जस्तो: पोखरी घर, खिलाना बजार, स्याङ्बोचे माइन्स (या यस्तै केही ठ्याक्क बिर्सेँ)
नेपालीमा कुनै गाली गरेको सुनिन्न। तर हिन्दीमा टन्नै छन: मादरचोद, बहनचोद, साला, चुतिया, हरामी, कुत्ते, कमीने, हरामखोर। चाहेको भए सायद गेम डेभलपरहरुले सजिलै मु*, माचि**, र*डीको छोरा, आदि गाली पनि राख्थे होला। तर यस्तो केही पनि भनेका छैनन्…. भलै देशका वरिष्ठ लेखक र तिनका हनुमानहरुलाई अचेल यो सामान्य लाग्दो रछ। हेहेहहे।
गाडीको रेडियो र गाउँमा मान्छेले बजाउने रेडियोमा पनि हिन्दी गीत नै बज्दछन तर यी गीत राम्रा छैनन्। शायद गेमकै लागि भनेर ४-५ वटा गीतहरु बनाइएको हुनुपर्दछ। तर कुनै कुनै गाउँमा पुग्दा भने सारङ्गीको धुन पनि बजेको सुनिन्छ। पक्का नेपाली सारङ्गी। एउटा गाउँमा नेपाली लाग्ने बाँसुरीको धुन पनि सुनेँ।
दक्षिणका छापामार लडाकु गुण्डाहरुले हिन्दीमा बोल्दा छोटा वाक्यहरू बोल्दछन। जस्तै: जागिर खतम छ, ज्यानको माया लाग्छ, छोरो नदेख्या धेरै भो, आदि। उत्तरका लडाकुहरुले भने यसरी आफ्नो भावना व्यक्त गरेको सुनिनँ।
किराँती सभ्यतालाई पनि गेमले धेरै रुपमा सम्मान गरेको देखिन्छ। गेमको कथा नै किराँत राज्यमा घट्दछ। जस्तो, गेममा एक भिलेन छिन जसको नाम हो ‘युमा’। युमा भनेको किराँत भाषामा निकै नै शक्तिशाली प्राचीन देवी हुन। गेममा यिनी शक्तिशाली त छिन तर देवी नभएर राक्षसको रुपमा। पगन मिनकी दाहिने हात यिनी खासमा हङकङबाट किराँत राज्यमा बसाइँ सरेकी हुन अरे। पगनको इशारामा मान्छेलाई मार्ने, दु:ख-सास्ती दिने काम गर्छिन यिनी।
यिनै हुन ब्याडयाँस युमा
भाषाको रेन्डरिङ भने पटक्कै मिलेको छैन। धेरै ठाउँमा उल्टोपाल्टो छ, बुझ्न गाह्रो हुने गरी।
बुझ्न नसकिने नेपाली
केही ठाउँमा उल्टोपाल्टो भए पनि बुझ्न सकिन्छ।
रेन्डरिङ नमिले पनि बुझ्न सकिन्छ यो चैँ
गेमभरिमा दुइटा मात्र ठाउँ भेटेँ जहाँ स्पष्ट देवनागरी बुझिने गरी नेपालीमा लेखिएको थियो।
गुरुङ खाजा घर अरे
के चाइया हो हामीलाई – बुझिएन
यिनी हुन पगन मिन – मपाईँ गर्दैछ
राना ग्रिल उद्योगमा फोन सेवा छ अरे।
यो गेमले नेपाली परिवेश कसरी समेटेको छ भनेर यो लेख्न खोज्या हो। म आफैँलाई चाख लागेर याँ लेखेर नाटक गरेँ। अरु कसैलाई चाख लागेर यो गेम खेल्न मन लागे खेल्नुहोला… समय बर्बाद पटक्कै हुने छैन। मैले पूरै गेम सक्न यस्तै ४४-४५ घण्टा लाएँ होला तर म बिस्तार खेल्छु। चाँडो खेल्नेले र साइड मिसन नगर्नेले १५-१६ घण्टामै पनि सक्छन अरे।
PS3, PS4, XBOX, र PC मा यो गेम उपलब्ध छ।
लेख्छु भन्दा भन्दै नि धेरै कुरा छुटाएँ होला। केही सोध्न मन लागे याँ कमेन्टिनुहोला वा तुइटराँ क्षेप्यास्त्र हान्नुहोला। धन्नेबात।
अर्धनग्न युवती, if polygon boobs are your thing 😉
तालबाराहीबाट प्रभावित हुनपर्छ यो
माथिको तालबाराही मन्दिर, साँझमा
← मधेश आन्दोलनका सामन्ती युवा
मायाको बारीमा घ्याम्पो जत्रो पेट →